FAKAFAKA: azy ny azy ! | NewsMada
FAKAFAKA: azy ny azy !
Mahavariana tanteraka ny zava-misy mianjady amin’ny kolontsaina malagasy. Ndeha hifaka amin’ny tontolon’ny hira ny fanadihadiana. Hay ve ka raha tsy mamaly ny hetahetan’ny vazaha ny tolotra omen’ireo mpihira manao fampisehoana any andafin’ny riaka, ka tsy hahita vokatra tsara e ? « Mazava ho azy… Izay no lalanan’ny tolotra sy ny tinady », hoy ny mpahay toekarena. Fa iza no miteny fa toekarena ihany no azo ibaikoana ny lalànan’ny tolotra sy ny tinady ? Azo dinganina soa aman-tsara io raikipohy io.
Ny maha izy azy ny isam-batan’olona, ny mampiavaka ny isam-paritra, ny mampisongadina isam-pirenena, sns, samy afaka mibaiko ny lalànan’ny tolotra sy ny tinady avokoa. Rehefa hay ny misintona « haza » amin’ny alalan’ireny, vita hatrany ny varotra. Tsy voatery hitady izay mahafapo ny vazaha. Porofo mivaingana amin’izany ny fahatongavan’izy ireo mitrandraka ny kolontsaina malagasy eto Madagasikara.
Raha ivoaka kely ivelan’ny kolontsaina ny fanadihadiana, matoa tonga mirodorodo eto ireo mpandraharaha amin’ny toekarena ireo, mahasarika azy ny haren’i Madagasikara. Maninona tsy raisina tahaka ny harena ihany koa ny kolontsaina sy ny fomba hoenti-mifehy izany ?
Matoa mora voarain’ny Malagasy ny kolontsain-dry zareo vahiny, tsy resaka toekarena ihany ny ao ambadik’ireny fa ny tontolon’ny toe-tsaina mihitsy. Maninona, ohatra, ny tanora malagasy no lasa mora mandray zava-bahiny, hevi-bahiny, kolontsaim-bahiny, sns ? Satria mbola ao amin’izy ireny ilay toe-tsaina napetraky ny fanjanahantany.
Raha hain’ny Malagasy ny mitazona ny maha izy azy, ho tavela any amin’ny tany niaviany any ny « azy ny azy » fa tsy ho tafiditra mora foana eto. Raha hain’ny Malagasy ny mampilendalenda ireo vahiny ireo, tsy maintsy manjifa ny tolotra omena azy izy ireo ary tsy voatery ho ny zavatra tadiaviny ihany no atao. Fihetsika izay hanimba tanteraka ny fototra maha Malagasy ny Malagasy raha mitohy ao anatin’ny taona vitsivitsy.